Akan Tertipu Lagikah Rakyat Malaysia Dengan Janji "PM 47%" Ini?
IDF- Celebrating 65 Years of Defense
Sabah and 'orang Malaya'...
Ambiga: PM's Panel Must Go - No Band Aids For Gaping Wounds
Doberman Petrol In Petaling Jaya
To All Political Leaders In BN and PR..an old favourite for you guys..Thank You..^_^
Shame to you U Thein Sein-Min Aung Hlaing for cowardice and failure to arrest Wira Thu led 969 movement
ရိုဟင်ဂျာကို မရှိဘူး၊ မကြားဖူးဘူးဆိုရင် နိုင်ငံရေး မလုပ်ကြနဲ့
သီလဖေါက်ရင်တော့ ငရဲကိုပဲလားရမယ်ဆိုတာ၊ ဗုဒ္မ္ဂဘာသာဝင်စစ်စစ်တိုင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြပါ
BBC News - Almost human: Lab treats trauma with virtual therapy
It has beenavery busy day and only now do I have the chance to update my blog.
Thanks to Mr. SKT, here'savery interesting article which might interest you. Havearestful evening!
As for me, my son just gave meaten-minute lecture to 'prepare' me for 'The Avengers'. OK. Movie time. Bye!
Posted: 01 Jun 2013 10:27 AM PDT
KUALA LUMPUR, 1 Jun — Usaha meningkatkan kredibiliti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) dengan meletakkan badan pengendali pilihan raya negara ini di bawah Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen (PSC) tidak bermakna tanpa menggantikan teraju utama badan berkenaan, kata pemimpin pembangkang dan aktivis pilihan raya.
"Tidak bermakna letakkan SPR di bawah PSC sekalipun, anggota mereka perlu letak jawatan," kata Pengerusi Bersama Bersih Datuk Ambiga Sreenevasan ketika dihubungi The Malaysian Insider.
"Mereka perlu letak jawatan, itu lebih mustahak supaya mereka mempunyai lebih kredibiliti," katanya lagi, dan menambah SPR adalah badan bebas yang dilantik di bawah Perlembagaan dan tidak boleh ditolak ke sana-sini.
"Pengerusi dan timbalan sekarang beroperasi seolah-olah mereka menjadi protagonis kepada ahli politik dan Barisan Nasional (BN) terhadap pemimpin Pakatan Rakyat (PR).
"Lebih elok sekiranya Najib mengadakan perbincangan dengan ahli Parlimen PR berhubung cadangan berkenaan sebelum pengumuman dibuat," kata Kit Siang, yang merupakan ahli Parlimen Gelang Patah.
"Jadi ia akan dilihat sebagai inovasi bipartisan," tambahnya.
Pembangkang yang diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengadakan Himpunan Black 505 di seluruh negara bagi menolak keputusan PRU13. -TMI
Posted: 01 Jun 2013 07:07 AM PDT
May 31st, 1948: On this day, 65 years ago, Israel's first prime minister, David Ben-Gurion, founded the Israel Defense Forces. It hasn't always been easy, but over the past six andahalf decades, the IDF soldiers have never wavered: looking danger in the eyes, confronting fear with bravery, and making the impossible possible. They do not take their responsibility lightly. They have the sole duty of protecting the existence of the State of Israel, and they promise to pass this sense of duty and devotion on to future generations of soldiers. Happy Birthday, IDF.
Posted: 01 Jun 2013 07:25 AM PDT
Update: Musa Aman says Nurul was stopped for Sabah's peace and security
I am not defending Nurul Izzah. Her 'deportation' from Sabah the other day was the prerogative right of the Chief Minister, and I believe it was done on legal basis, based on Sabah Constitution and its immigration law.
However, asaMalaysian, I think the 'too downright explanation' given by Sabah Kini is making some of us, especially us in 'Malaya'abit hurt. Some of the definitions used to answer Nurul are reaching deep into the hearts of 'rakyat Malaya di Semenanjung'.
Maaf, bah. I don't quite understand the double standard in defining betweena'Malaysian', 'Sabahan' or 'Sarawakian'. Does it mean Malaysians from 'Malaya' have to apply special permission to enter Sabah as tourists or non-political engagement?
I believe PM Najib and Home Minister Zahid Hamid will have to zoom in into this issue as the 'individu milik negeri Sabah' does not augur well for our 1Malaysia concept.
If it applies to Nurul, means it also apply to all Malaysiains from 'Malaya'. I think there are more Sabahans in 'Malaya' than the 'Malayans' in Sabah, and any Sabahan who comes to any part of the Semanjung is not subjected to any immigration law as their Mykad is the valid proof that they are Malaysiains who are free to go to any part of the country.
I don't know as to whether the writer was 'emotionalised' by Nurul's issue but such an 'open revealing' could have been measured before it goes to print.
I also believe our immigration law that requires those from 'Malaya' to fill up special form before arriving in Sabah and Sarawak should be reviewed and, possibly abolished.
Again, it applies to all people of 'Malaya'. I have been to Sabah many times without having to 'apply' for my stay or visit there. I am not sure if 'orang Malaya' likes being treated as aliens in Sabah and Sarawak because suchasegregation is not healthy for national unity.
But Sabah is beautiful!
Posted: 01 Jun 2013 07:40 AM PDT
"Jadi saya gesa, eloklah Pengerusi SPR dan timbalannya meletakkan jawatan ekoran krisis kepercayaan oleh parti yang bertanding dalam PRU lalu," ujarnya. -KD
Posted: 01 Jun 2013 04:13 AM PDT
Ambiga: PM's panel not okay, EC heads must go
7:02PM Jun 1, 2013
co-chairperson Ambiga Sreenevasan said Prime Minister Najib Abdul Razak
would do better to have the Election Commission (EC) heads removed than
to announceaspecial committee to overseeacommission that has
already lost public confidence."The prime minister is
Posted: 01 Jun 2013 04:08 AM PDT
Here's Zhar and me checking out the disabled-friendly car park in
Gasing Indah making sure that it wasn't abused by an able-bodied driver.
My service dog and I - during his medical check-up nearby - couldn't
resist the temptation to do some patrolling of our own in 'keeping the
city's street safe' forawhile.
After the morning adventure,
Posted: 01 Jun 2013 05:31 AM PDT
Katanya, ketika berada di London beliau sedih apabila membaca laporan akhbar New York Times bahawa skim pengubahan wang haram yang beroperasi di bawah Liberty Reserve memiliki jutaan pelanggan di seluruh dunia yang 'bersifat penjenayah' itu melakukan 55 juta transaksi dalam tempoh tujuh tahun lalu.
"Dalam kes pengubahan wang haram dalam talian terbesar dalam sejarah, Liberty Reserve bergantung sepenuhnya kepada penukar pihak ketiga untuk menerima dan membuat bayaran bagi pihak mereka, yang selalunya adalah 'usahawan pengirim wang tidak berlesen yang tidak mempunyai badan pemantau kerajaan atau undang-undang yang signifikan, berpusat di Malaysia, Rusia, Nigeria dan Vietnam'.
"Global Financial Integrity Report yang berpengkalan di Washington menyenaraikan negara China di tangga pertama dalam aliran keluar wang haram yang selalunya berunsur rasuah berjumlah US$2.8 trilion dan Malaysia berada pada kedudukan kelima di dunia dengan US$291 bilion. Namun atas dasar per kapita, China kalah kepada juara dunia Malaysia dengan hanya RM6,400 seorang setahun berbanding RM32,000 bagi Malaysia," katanya dalam kenyataan media, hari ini.
Guan Eng yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, di England, malangnya Malaysia mempunyai sejarah silam apabila warganya ada yang menjadi 'bookie' mengatur perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris.
"Reputasi antarabangsa Malaysia kini lebih teruk daripada Thailand atau Indonesia dan hampir sebaris dengan negara seperti Nigeria dan Rusia dalam hal pengubahan wang haram.
"Masanya sudah tiba bagi Kerajaan Persekutuan BN berhenti hidup dalam penafian dengan melaksanakan reformasi kewangan yang tulen untuk membersih dan menghentikan aktiviti jenayah aliran keluar wang haram serta pengubahan wang haram.
"Jika tidak, tidak ada ertinya Bank Negara mendapat pelbagai penghargaan untuk apa yang disangkakan sebagai pengurusan ekonomi yang baik sedangkan isu sebenar berkaitan ketelusan dan akauntabiliti tidak boleh diuruskan," ujarnya
Posted: 01 Jun 2013 12:41 AM PDT
" ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေထဲမှာ ဘာသာရေးပါလာမှာကို မူအားဖြင့်မကြိုက်ဘူး။ တချို့အမတ်တွေက ဘာသာရေးကို တနည်းနည်းဖြင့် ထည့်ပေးစေချင်တယ်။ တချို့ကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ် ထည့်ပေးစေချင်တယ်။အဲဒီလို ရှိနေပေတဲ့ ဒီကိစ္စမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ အင်မတန် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် ဘယ်အမတ်ကမှ အမတ်ပေါင်းစုံညီလာခံမှာ ဒီကိစ္စကို မပြောရဲကြဘူး။ ဒါပေမယ့် အမတ်ပေါင်းစုံညီလာခံ ကျင်းပတဲ့ နေ့ရက်အတွင်းမှာ ရဟန်းတော်အချို့နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်အချို့ အခြေခံ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေထဲမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာ အဖြစ် ထည့်ပေးဘို့ သတင်းစာထဲမှာ တောင်းဆိုလာတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အဲဒီ့ အမတ်ပေါင်းစုံ ညီလာခံရဲ့ နေ့တနေ့မှာ စကားပြောနေတုန်း သတင်းစာတွေထဲက တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်မနေနိုင်ဘူးလို့ လွှတ်ကနဲပြောလိုက်မိတယ်။
အဲဒီ့ဥပဒေရဲ့ တနေရာမှာဘာသာရေးကဏ္ဍကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီ့ကဏ္ဍအောက်မှာ ကက်လသစ်ဂိုဏ်းဟာ အိုင်ယာလန်တွင် အများဆုံးလက်ခံသော ဂိုဏ်းဖြစ်တယ်။ ပရိုတက်စတင့် ဂိုဏ်းဝင်များလည်း အိုင်ယာလန်မှာ ရှိကြတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ပါတဲ့ စာပိုဒ်တွေကိ သခင်နုတွေ့ရတယ်။ အဲဒိတော့ ဆာဟူးဘတ်ရန်စ့်က ဆက်ပြီး အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေထဲမှာ ဘာသာရေးလုံးဝမပါဘူးဆိုရင်တော့ ရဟန်းတော်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ စိတ်ထဲ အတော်ထိခိုက်လိမ့်မယ်။ အိုင်ယာလန်အခြေခံ အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေထဲမှာလို ဗမာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လူအများဆုံးကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဖြစ်တယ်။ တခြားဘာသာတွေလည်း ရှိတယ် ဆိုတာလောက်တော့ ထည့်ပေးသင့်တယ်။ အမတ်တွေထဲကတော့ ဘယ်သူမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြောရဲမှာ မဟုတ်ဘူး ပြောရင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နားထောင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သခင်နု ပြောမှ ရမှာဘဲလို့ ဆာဟူးဘတ်ရန်စ့်က စိုးရိမ်နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ သခင်နုကို ပြောပြတယ်။ သခင်နုလဲ အိုင်ယာလန် အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ စာအုပ်ကို ယူပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ် တန်းသွားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် အခြေခံအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေထဲမှာ ဘာသာရေးကဏ္ဍ ပါလာတာတွေ့တော့ ဖဆပလအမတ်တွေဟာ အတော် အံ့အားသင့်နေကြတယ်။"
Posted: 01 Jun 2013 02:09 AM PDT
Posted: 01 Jun 2013 12:33 AM PDT
"အစကတော့ မသန်းအေး (မိဘမေတ္တာကွမ်းယာဆိုင်)ရဲ့ ယောက်ျားက ၉၆၉ တံဆိပ်တွေ ဝေတယ်၊ ကျွန်မက မကပ်ချင်ဘူး။ ဆိုင်မှာ ဘုရားစင် ရှိတယ်ပြောတော့ သူက ခင်ဗျားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီး ပြောပြီး အတင်းကပ်သွားတယ်ဆိုင်မှာ။ နောက်ပြီး ပြောသေးတယ် ဒီတံဆိပ် မကပ်ထားရင် နင်တို့ဆိုင်ကို ကုလားဆိုင်နဲ့ မှားဖျက်ရင် တာဝန်မယူဘူးလို့လည်း ပြောတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့က ဒီနားလေးမှာ ဆိုင်လာဖွင့်တာပါ ကိုယ်ပိုင် ဆိုင်ခန်းလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနားက ဘာသာပေါင်းစုံ ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်၊ ဒီနေ့ကျ ဒီစာအုပ် လာပေးတယ်၊ မလိုချင်ဘူး ပြောတော့ ဇွတ်အတင်းပေးသွားတယ်"လို့ အဆိုပါစာအုပ်လက်ခံရရှိပြီးနှင့် ၉၆၉ တံဆိပ် ကပ်ခံရသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ပြောပြလာပါတယ်။
Posted: 31 May 2013 10:11 PM PDT
Posted: 31 May 2013 09:38 PM PDT
A little help for the persecuted Rohingya Akbar Ahmed , Harrison Akins Op-Ed
The "forgotten Rohingya" are one of the most persecuted minority groups in the world
Rohingya Muslims Photo- Wikimedia
The "forgotten Rohingya," whom the BBC calls "one of the world's most persecuted minority groups," are the little-publicised Muslim people historically located in the coastal Arakan state of western Burma, dating their ethnic lineage in this region over centuries.
When the military junta under General Ne Win, an ethnic Burmese, came to power in 1962, it implementedapolicy of "Burmanisation." Based on the ultra-nationalist ideology of racial "purity," it wasacrude attempt to bolster the majority Burmese ethnic identity and their religion Buddhism, in order to strip the Rohingya of any legitimacy.
In addition to the complete denial of their rights, the Rohingya were subjected to modern-day slavery, forced to work on infrastructure projects which include constructing "model villages" to house the Burmese settlers intended to displace them.
This article was originally published by The Guardian and has been reprinted by special arrangement.
Posted: 31 May 2013 09:22 PM PDT
အားတော့နာပါတယ်။ သို့သော် ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်လှ၏။
တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အချက်အလက်အပေါ် အခြေခံတဲ့ တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးမှုတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာပြသနာက ပြည်ထောင်စုရဲ့ လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်နေပါပြီ။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်လာပါပြီလို့ အာဘောင်အာရင်း သန်သန်၊ တံတွေး တသီးသီးနဲ့ မိန့်ခွန်းကြီးငယ်ကို ချွေနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား ကြီးငယ်တို့အနေနဲ့ ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့၊ ဒီလောက်တောင် တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို ခြိမ်းချောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကို သမိုင်းအထောက်အထားမှန်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဓမ္မဒိဌာန်ကျကျ အလေးအနက်ထား မလေ့လာကြတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ ဟိုလူပြော၊ ဒီလူပြောတာတွေလောက်နဲ့သာ ကြေနပ်နေကြပြီး သံယောင်လိုက် ဖေါလုံးလုပ် နေကြတာလဲ။ သူများပြောတိုင်း မယုံနဲ့လို့ ဗုဒ္ဓက ကာလမသုတ်မှာ ဟောကြားခဲ့တာကို မေ့ထားလိုက်ကြပြီလား။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး မြန်မာသမိုင်းမှာ ရှိခဲ့တယ်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ သတ္တိရှိရှိ ဗြောင်ပြောရဲသူများရှိရင် လေးစားပါတယ်။ ထိုသူများသည် သမိုင်းမှန်ကို ကြည့်ရဲသူများ၊ မိမိလက်မခံနိုင်သည်ကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောရဲသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း မလိမ်တတ်သူများလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတ္တိရှိရှိ ပြောခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး သဘောကျ လက်ခံနိုင်တဲ့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ရပ်ကို တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ကျနော်တို့ စုပေါင်းရှာဖွေနိုင်မှာပါ။ အဲဒီအဖြေမျိုးကို ကျနော်တို့ လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း၊ ရခိုင်အကြောင်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောဖို့ အရည်အချင်း(Qualify) ပြည့်မီသူများ ဟုတ် မဟုတ် မိမိဖာသာ ဆန်းစစ်ချင်သူများအတွက် ညာဏ်စမ်းမေးခွန်း(Quiz) တစ်ချို့ကို မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကို ဖြေကြည့်ဗျာ။
၁။ အင်္ဂလိပ်ပြန်အဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးစားနေချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးရဲ့ ခေါင်းဆောင်အချို့က "အာရကန်နစ္စတန်"ဆိုပြီး သီးခြားနိုင်ငံ ခွဲထောင်ရေးလုပ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးဖို့ ကြံစည်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလူမျိုးက ရိုဟင်ဂျာလား။
၂။ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲဖြစ်အောင် အင်္ဂလိပ်ကို မြှောက်ထိုးပင့်ကော် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ (မခေါ်လည်း အင်္ဂလိပ်က ဝင်မှာဆိုတာက တကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။) အင်္ဂလိပ်ဖက်က စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီးတောင် ဝင်တိုက်ပေးခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ် စကျွန်ပြုကတည်းကနေ လွတ်လပ်ရေးရသည်အထိ အင်္ဂလိပ်အလိုတော်ရိတွေလုပ်ပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးကို ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီလူမျိုးက ရိုဟင်ဂျာလား။
၃။ အင်္ဂလိပ်က တိုက်ပြီး စုစည်းပေးလိုက်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်၊ အိန္ဒိယ(ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယစုပေါင်း)ပြည်ဆိုပြီး နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိသလား။ အင်္ဂလိပ် မသိမ်းခင်က အခုလို တစ်စုတစ်ပေါင်းတည်း နိုင်ငံကြီး မဖြစ်ခဲ့သေးဘူးဆိုတာကို သိသလား။
၄။ တိုင်းရင်းသားတွေက ပင်လုံစာချုပ်မှာ လက်မှတ်မထိုးခဲ့ရင် မြန်မာပြည်မှာ ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကယား ပြည်နယ်တွေ မပါတော့ဘူးဆိုတာ သိသလား။
၅။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါမှာ တရုပ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယဆိုပြီး နယ်စပ်တွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အခါမှာ မိမိနယ်နိမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျင့်ဝတ်ကို သိသလား။
၆။ နယ်နိမိတ်ခွဲတဲ့အခါမှာ ရခိုင်တွေကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာ ပါဝင်လိုကြောင်း ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင် အချို့က ပါကစ္စတန်ခေါင်းဆောင် မိုဟာမက် အလီဂျင်းနားကို တောင်းဆိုတယ်။ မိုဟာမက် အလီဂျင်းနားက ဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပြောပြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မိုဟာမက် အလီဂျင်းနားကို ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေး ရကြမယ်လို့ အာမခံပြောကြားခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်း ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး(အဲဒီတုန်းက တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးဆိုပြီး နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ခွဲပြောတာမျိုး မရှိဘူး။ နိုင်ငံသားအားလုံး တန်းတူဖြစ်တယ်။) အပြည့်အဝရကြမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိသလား။
၇။ ဟိုတုန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေက သူတို့ကို သူတို့ ရခိုင်မွတ်စလင်လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေက ရခိုင်မှန်ရင် ဝက်သားစားရမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ငြင်းပယ်ခဲ့လို့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းနာမည်ကို စွဲကိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိသလားး။
၈။ ဦးနုလက်ထက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်းတော့ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲက ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေက ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ရင် စစ်တွေက ရခိုင်တွေ ခေါင်းဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အောက်မှာ မနေလိုဘူး။ ပုသိမ်ခရိုင်နဲ့ တွဲနေချင်ပါတယ်လို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကို သိလား။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို တောင်းဆိုရသလဲ သိလား။ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်းဆိုမှုကို ရခိုင်အများစုက လက်မခံခဲ့ကြဘူးဆိုတာ သိလား။ ဘာကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူအများစုက လက်မခံခဲ့ရတာလဲ သိလား။ ဘာကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်သွားသလဲ သိလား။
၉။ ရခိုင်က ရခိုင်ကိုတောင် မယုံတဲ့ သမိုင်းဖြစ်စဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်သွားရင် ငါတို့ ရိုဟင်ဂျာေတွ အဖိနှိပ်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီး ခွဲထွက်ရေးဆန်ဆန် လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိသလား။ နောက်ဆုံး ရခိုင်ပြည်နယ်အောက်မှာ မထားဘဲ ပြည်မက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ မေယုခရိုင်ပေးပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သီးခြားအသိအမှတ် ပြုပေးပါမယ်လို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုကော သိကြသလား။
၁၀။ မြန်မာပြည်မှာ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်းဆိုတဲ့ အဓိကတိုင်းရင်းသား (၇)မျိုးလုံးနဲ့ တိုင်းရင်းသားငယ် အများအပြားဟာ ခွဲထွက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖူးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သိသလား။
(ဒါက အခုစာရေးနေရင်း စိတ်ထဲပေါ်လာတာကို ရေးချလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပြုချက်များ ရရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျနော်နောက်ထပ် သတိရရင်ဖြစ်ဖြစ် ထပ်ဖြည့်စွက်ပေးသွားမယ်။)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကြားလည်း မကြားဖူးပါဘူးဆိုရင် ကိုယ်ဗဟုသုတနည်းတာ၊ စာမဖတ်တာ၊ သမိုင်းအတာကို လူသိအောင် လုပ်နေသလိုပါဘဲ။ ရှက်စရာပါ။ ဒီလိုလူများကို ကိုဗလကြီးက ကူညီနိုင်ပါသတဲ့။
by ကို ဗလကြီး on Thursday, May 17, 2012 at 9:59am
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မနေ့ကမှ ဘွားကနဲပေါ်လာသလို ပြောနေသူတွေရှိသလို၊ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း သေသေချာချာ အစုံအလင် သိနေသူများလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဲဒီတော့ စာဖတ်နေတဲ့ခင်ဗျား လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ ရိုဟင်ဂျာတို့ရဲ့ဘ၀ ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ အစိုးရက လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လိုငြင်းငြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ဖိအားကို လွန်ဆန်ဖို့ဆို မဖြစ်နိုင်တာရယ် ….တချိန်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်လူမျိုးစုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကြောင့် …. နောက်ဆုံးတော့ အော်ငြင်းနေတဲ့ ပါးစပ်တွေညောင်း၊ လက်တွေနာ၊ ဒါတွေပဲ အဖတ်တင်မယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်မိပါ၏။
(၁) ၁၉၅၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန် – နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ အသံလွှင့်မိန့်ခွန်းတွင် မောင်းတောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ပြည်ထောင်စုသားများသည် များသောအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားဖြစ်ကြသည် ပြောကြားခဲ့သည်။
(၂) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဗဆွေမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နှင့် (၄) ရက်နေ့များတွင် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောမြို့ လူထုအစည်းအဝေးများတွင် ရိုဟင်ဂျာများသည် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု တခုဖြစ်ကြောင်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
(၃) နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး လက်အောက် နယ်ခြားဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး ကြေငြာချက် (ရက်စွဲ – ၂၀.၁၁.၆၁)တွင် မေယုဒေသ အတွင်းနေထိုင်ကြသူများသည်တိုင်းရင်းသားရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြောင်းပါရှိသည်။ (မေယုဒေသ = ယခု မောင်းတောခရိုင်)
(၄) ၁၉၆၁ မေလ(၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ၁၉၆၅ မတ်လအထိ မြန်မာ့အသံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဘာသာစကား အစီအစဉ်တွင် တပတ်လျှင် (၁၀) မိနစ်ကျစီ (၃) ကြိမ်၊ ညနေ ၅း၃၀ နာရီတွင် ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားဖြင့် အသံလွှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ (နှစ်သုံးဆယ် မြန်မာ့အသံ – ဦးကျော်ငြိမ်း မာတလိ)
(၅) စာပေဗိမာန်ထုတ် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ (၉) စာမျက်နှာ (၈၉-၉၀)မှာ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်တိုင်းမြောက်ပိုင်း မေယုခရိုင်တွင် လူဦးရေ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်းခန့်ရှိပြီး ၇၅%သည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်သည်ဟူ၍ အကျယ်တ၀န့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
(၆) ကာကွယ်ရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) (၁၈.၇.၆၁)နှင့် (၈.၈.၆၁) နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တို့တွင် မေယုခရိုင်၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင် အနောက်မြောက် မြို့နယ်များတွင် အများစုအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး၊ လူနည်းစုမှာ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမီစသော လူနည်းစုများစွာ ပါဝင်နေထိုင်သည့် ခရိုင်ဒေသတခုဖြစ်ပါသည်ဟူ၍ ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
(၇) ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၏ (၈.၇.၆၁) ပြောကြားသောမိန့်ခွန်းတွင် "ကျွန်ုပ်တို့ ဒီခရိုင်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်။ မေယုခရိုင်၏ အနောက်ဘက်တွင် ပါကစ္စတန်(ယခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်) ရှိပြီး မွတ်ဆလင်များနေကြပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ နေသူများကို ပါကစ္စတန်ဟုခေါ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်မှာရှိသူများကို ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တယ်။ မြန်မာ၊ ပါကစ္စတန်နယ်စပ်တခုတည်းမှာသာ လူမျိုးတမျိုးတိုင်းပြည်ခြား၍ နေကြသည်မဟုတ်၊ တရုတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော နယ်စပ်တွင်လည်း ဤသို့လူမျိုးချင်းဆက်စပ်နေကြသည်။ ဥပမာ – ကချင်မှာ လီဆူး၊ အီကော၊ လ၀ စသည့်လူမျိုးများရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း ၄င်းလူမျိုးများရှိသည်။ ထိုနည်းတူ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရှမ်းလူမျိုးများ ရှိသလို တရုတ်ပြည်တွင်လည်း တိုင် ဆိုသောရှမ်းလူမျိုးများရှိကြပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် မွန်၊ ကရင်၊ မလေးရှိသလို ယိုးဒယားဘက်တွင်လည်း ထိုလူမျိုးများရှိကြပါသည်။ အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တွင်လည်း ချင်း၊ လီရှော၊ နာဂလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိသကဲ့သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းရှိကြသည်။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချင်တယ်။ မေယုခရိုင်ကို ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့ လူနည်းစုတစုလို့ သဘောထားမယ်။ အဲဒီတော့ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တာတွေရှိရင် ခင်ဗျားတို့အားလုံးမေ့ကြ၊ ဒီအချိန်ကစပြီး ခင်ဗျားတို့ မေယုခရိုင်က လူတွေဟာ တို့ဗမာ ပြည်ထောင်စုသား၊ တို့ဗမာပြည်ထောင်စုထဲက လူမျိုးစုတစုလို့သဘောထားကြပါ။"စသည်ဖြင့် အကျယ်တ၀န့် ပြောခဲ့သည်။
(၈) ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်တန်း ပထ၀ီဝင်ဖတ်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ (၈၆) တွင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပုံပြရာမှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကို ရိုဟင်ဂျာများ နေထိုင်ရာဒေသအဖြစ် ပြသထားပါသည်။
(၉) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသင်းအဖွဲ့လည်း ထူထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ရာ ၃.၁၂.၅၉ ရက်စွဲပါ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၁၂/၅၉ ဖြင့် "This is to certify that Rangoon University Rohingya Student Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the academic year 1959-1960" ဟူ၍မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
(၁၀) ၁၉၆၀ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို သိမ်ဖြူအားကစား ပြိုင်ဝင်းအတွင်း ကျင်းပပေးခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာယဉ်ကျေးမှု ပြပွဲတခုဖြစ်သော ကျင်ပွဲကို ပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
(၁၁) မြန်မာအသံ (၂၅)နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင်အဖြစ် ၁၉၇၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သောတရှင်မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေခဲ့ရာ စာမျက်နှာ (၅၅) တွင် ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှစ၍ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားအဖြစ် စတင်အသံလွှင့်ခွင့် ပြုသည့်ရက်စွဲများကို ဖော်ပြရာတွင် ၁၉၅၇တွင် ရှမ်းနှင့် ကချင်ဘာသာ၊ ၁၉၄၉တွင် စကောကရင်နှင့် ပိုးကရင်ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ချင်းဘာသာ၊ ၁၉၆၁တွင် မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ကယားဘာသာတို့ အသံလွှင့်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ မွန်၊ ပအို့၊ လားဟူ၊ ရိုဟင်ဂျာဘာသာတို့ဖြင့် အသံလွှင့်ခွင့်ကို ၁၅.၅.၆၁ နေ့မှစ၍ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ၁.၁၀.၆၅ နေ့တွင် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
(၁၂) ၁၉၆၀ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုနေ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲကို အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းတွင် နိုင်ငံတော်မှ ကျင်းပခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ ကျင်ပွဲခေါင်းစဉ်ဖြင့် တခမ်းတနား ကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့သည်။
(၁၃) ၂၀.၁၁.၆၀နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ နယ်ခြားဒေသအုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိ ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မေယုနယ်ခြားခရိုင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရာ ရိုဟင်ဂျာများမှလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုကြကြောင်း၊ သူရသတ္တိရှိသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးလိုလားပြီး သစ္စာရှိသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပြည်ထောင်စု၏ လူမျိုး တမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာ့အသံ (ရေဒီယိုအစီအစဉ်)မှလည်း ထိုအကြောင်းအရာကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
(၁၄) ၁၈.၇.၆၁ ရက်နေ့ထုတ် တပ်မတော် ခေတ်ရေးစာစောင် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၆) စာစောင်တွင် "မေယုနယ်မှလေ ဘယ်လို အခြေရှိပါလိမ့်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုဒေသ၏ လူအများစုသည် ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးဖြစ်သည်။
(၁၅) ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော တပ်မတော် ခေတ်ရေးစာစောင် (၂) စောင်အနက် ၈.၈.၆၁ နေ့ထုတ် အတွဲ (၁၂) အမှတ် (၉) တွင် "ပျောက်ဆုံးနေသော ညီအစ်ကိုတစ်ဦးကို ရှာတွေ့သည့်ပမာနှယ်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ၉၇% ရှိကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
Posted: 31 May 2013 09:15 PM PDT
I am just sharing my thoughts with the hope that when one talks about change, one cannot switch sides as easily as changing underwear. One must be cautious that whatever ideals one may have is not the product of propaganda, jumping on the bandwagon or conforming to populist views. A middle ground exists and rather than slamming one for not choosing one of two extremes, perhaps we should consider the reason for their stand. To be and to me, balance is important. There cannot beadogmatic view of "if you're not with us you're against us" because such fallacies are born out of conformity to hard-hitting campaigns.
Posted: 01 Jun 2013 01:40 AM PDT
Posted: 31 May 2013 11:45 PM PDT
Posted: 31 May 2013 08:23 PM PDT
ကျွန်တော့သားကပြောတယ်၊ ဖေကြီးဒါမျိုးတွေမရေးပါနဲ့ အန္တရယ်ရှိနိုင်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်၊ မိတ္ထီလာကိစ္စကတည်းက မီဒီယာတွေနှာစေးသွားတယ်။ သိသိသာသာကြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့် မှုတွေနဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို တာဝန်ရှိရှိလုံးစေ့ပတ်စေ့တင်ပြဖို့လက်ရှောင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှာကဒီ Social network လေးပဲ Outlet ရှိတာ….ပြီးတော့ကိုယ့်မှာ နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေ၊ ဘာသာခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ၊
ပြန်စဉ်းစားတယ်.. မဖြစ်ဖူး..သတ္တိမွေးရတယ်၊ ငါတို့ဆက်ပြောနေမှဖြစ်မယ်၊
တချို့တချို့တွေ အစွန်းရောက်နေပေမယ့်၊ ငါတုို့ဘာသာဟာ အစွန်းရောက်ဘာသာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာပြဖို့ .. တချို့တချို့တွေ ရုိုင်းစိုင်းရက်စက်ကြပေမယ့်၊ ငါတို့လူမျိုးတွေဟာ လူသားဆန်ပြီး စာနာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာပြဖို့ … တချို့တချို့တွေနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ထဲမှာ မျိုးချစ်တံဆိပ်စိတ်ကြွ ဆေးမိပြီး မဲမဲမြင်ရာကို ရန်လုပ်နေပေမယ့်၊ ပြည်သူတိုင်းဟာ နိုင်ငံရေးသူငယ်နပ်စားတွေ မဟုတ်ဖူးဆိုတာပြဖို့ .. အစွန်းရောက်၊အကျင့်ပျက်တဲ့ မွတ်စလင်တချို့ကြောင့်၊ ကမ္ကာမှာရောမြန်မာမှာပါ၊ ပြဿနာတွေရှိတယ်ဆိုတာမငြင်းပါဖူး။ ပြောနေတာကပြဿနာဖြေးရှင်နည်းကိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တော့ အမေရိကန်လို မွတ်စလင်အစွန်းရောက်တွေရဲ့ ရန်သူမဟုတ်သေးပါဘူး။ ရောက်ရာအရပ်မှာ မြန်မာလူမျိုး၊ဗုဒ္မ္ဂဘာသာဖြစ်လို့တိုက်ခိုက်ခံရတာ ၊ပြန်ပေးဆွဲခံရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အမေရိကန်လူမျိုးတွေ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ၊ ဒီလိုကြုံတွေ့နေရလို့သူတို့တိုင်းပြည်မှာ တွေ့ရာမွတ်စလင်ကိုရန်ပြုပြီး၊ဗလီကိုမီးမတိုက်ပါဘူး။ ဒါဟာလူမျိုးတမျိုးရဲ့စရိုက်လက္ဒ္မဏာ.. အသိဥာဏ်နဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြနေတာပါ။ ဒီလို ဘာသာရေးလူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဆိုတာရက်ပိုင်းအတွင်း တတိုင်းတပြည်လုံးကူးဆက်သွားတက်တဲ့ သဘောရှိတာကြောင့်အခုအချိန်အထိဒီလို မဖြစ်သေးတာဟာ၊ လူနဲစုရဲ့လှုံဆော်မှုဆိုတာထင်ရှားနေပြီး၊ နိုင်ငံသားအများစုကတော့ မလိုလားမထောက်ခံဖူးဆိုတာသေခြာ သလောက်ပါပဲ။ စိုးရိမ်မိတာကကြာရင်နိုင်ငံရဲ့ Image ကိုထိခိုက်ပြီး နိင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူတွေ နောက်လှည့်ပြန်ကုန်ကြမှာကိုပါ။ ဒီလိုလူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေအပေါ် ဆက်ဆံပြုမူတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကို၊ ဘယ် သူစိမ်းဧည့်သည်မှ မလာပါဘူး။ လူတချို့ ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကပြောချင်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအောက်လမ်းနည်းဟာ၊ တချိန်ထဲမှာရှိစုမဲ့စု တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင်၊ ကမ္ကာ့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးပမ်း ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္မ္ဂဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုး ဦးသန့် ရဲ့ မှတ်တိုင်ကိုတံတွေးနဲ့ထွေးသလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာပါပဲ။ တရားတဲ့နည်းလမ်းကိုမသုံးရင် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာလည်းတရားတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်မှာမဟုတ်သလို၊ ရဲရဲ၊မရဲရဲ၊ တနေ့သေရမှာဖြစ်ပြီး၊ သီလဖေါက်ရင်တော့ ငရဲကိုပဲလားရမယ်ဆိုတာ၊ ဗုဒ္မ္ဂဘာသာဝင်စစ်စစ်တိုင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်။
FB of ခွန် ဒီးယမ် ·
Posted: 31 May 2013 08:12 PM PDT
Tetapi jika seseorang mengkritik kerajaan yang rasuah dan menyalahgunakan kuasa dan membantutkan usaha memperkayakan perpaduan kaum itu tidak salah dan adalah 'ultra-vires' jika tindakan diambil terhadap rakyat itu. Jika semua kritikan terhadap kerajaan itu membolehkan pasport mereka terbatal maka negara kita seolah-olah sebuah negara yang zalim dan tidak bertamadun.
Posted: 31 May 2013 04:30 PM PDT